ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတော်တော် များများမှာဝတ်ခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်ရိုက် ကူးခဲ့တဲ့ ဖလက်ရှ် (FLASH)ကုတ် အင်္ကျီလေးကို လေလံတင် ရောင်းချပြီး ရဲတိုက်ကိုကူညီ ပေးမယ့်…. – Shan Ma Lay
June 7, 2021 aung aungLeaveaComment on ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတော်တော် များများမှာဝတ်ခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်ရိုက် ကူးခဲ့တဲ့ ဖလက်ရှ် (FLASH)ကုတ် အင်္ကျီလေးကို လေလံတင် ရောင်းချပြီး ရဲတိုက်ကိုကူညီ ပေးမယ့်….
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားချော ရဲတိုက်ဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယို ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာ
သဘာဝကျကျ ပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင် တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ် ချစ်ခင်အောင် ပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ရဲတိုက်က အခုလက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူတစ်သားတည်း ရပ်တည်ပေးခဲ့ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ နဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူအမှန်တရားဘက် ကရဲရဲဝင့်ဝင့် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်က ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့် အရေးယူခံခဲ့ရပြီး ဧပြီလ ၃ရက်နေ့ညက ရန်ကုန်မြို့ သမိုင်းလမ်းဆုံမှာ ဖမ်းဆီးခံလိုက် ရတာပဲဖြစ် ပါတယ်နော်။
ရဲတိုက်တစ်ယောက် ထောင်ထဲမှာ ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ သတင်းကြားရတဲ့ အခါမှာလည်း ပရိတ်သတ် တွေများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ “အခုတခါ လေလံတင် ရောင်းချမဲ့ ကုတ်အင်္ကျီ လေးကိုရဲတိုက် ရဲ့ ဖလက်ရှ် (Flash) ဇာတ်ကားကို နှစ်သက်် အားပေးခဲ့တဲ့သူတွေ မှတ်မိကြမယ် ထင်ပါတယ်။…ဇာတ်ဝင်ခန်း အတော်များများမှာ သူဝတ်ဆင်ခဲ့တာပါ။
….ဖလက်ရှ်ဇာတ်ကားနဲ့ ရဲတိုက်ကို စသိခဲ့ နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ် တွေလည်းရှိမယ်လို့ယုံကြည် တာကြောင့် ဒီကုတ်အင်္ကျီ လေးကို.လေလံတင် ရောင်းချဖို့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့ပါတယ်။…
လေလံကြမ်းခင်းစျေး ကိုမသတ်မှတ် ထားပါဘူး။…21.6.21 နေ့ ညနေ ၆နာရီမှာလေလံ ပိတ်သိမ်းမှာ ဖြစ်ပြီး ရရှိလာတဲ့ငွေကို ရဲတိုက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ သုံးဖို့အတွက် သူ့ရဲ့အုပ်ထိန်း သူထံ၁၀၀%အပြည့်အဝ ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
….Mobile banking. …wave pay. ..Kpay. …CB pay. ..OK$ တို့နဲ့လည်းပေးချေ လို့ရပါတယ်။GARUDA ENTERTAINMENT PAGE CONTACT ကနေတဆင့် ဆက်သွယ် ဝယ်ယူနိူင်ပါတယ် ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ
ချစ်ခင်တန်ဖိုးထားပြီးအားပေး ကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်” ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ချင်းစီကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
ဘီလင်းမြို့ တောင်စွန်းက သားငယ်လေးအတွက် လှူဒါန်းပေးထားတဲ့ ခြေတုလေးရလို့ ပျော်နေတာကို ကြည့်ပြီး ဝမ်းသာနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ(အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
ေတးသံရွင္ပုိပို၊ သရုပ္ေဆာင္ေျပတီဦးတုိ့လုိ့ အနုပညာရွင္ေတြနဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေႀကာင့္ ေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ့ ငုိအားထက္ ရီအားသန္ အေျခအေနကုိ ေျပာျပလာတဲ့ ေရွ့ေနႀကီးတဦး………..
June 29, 2021 aung aung
အိန္ဒြာကျော်ဇင်နှင့်ပတ်သတ်၍ ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက် မက်တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ်ခင်စန်း၀င်း